1 Samuweli 10 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
← 1 Samuweli 9 1 Samuweli 11 →
2 Ekumkeni kwakho kum namhla, uya kufumana amadoda amabini ngasengcwabeni likaRakeli, emdeni wakwaBhenjamin, eTseletsa; aya kuthi kuwe, Zifunyenwe iimazi zamaesile obuye kuzifuna. YabonaYabona, ukuyekile uyihlo ukuthetha ngeemazi zamaesile ezo; unesithukuthezi ngani, esithi, Ndiya kuthini na ngonyana wam.
6 UMoyaUMoya kaThixo wokufikela ngamandla, uprofete ndawonye nabo, uguquke ube mntu wumbi.
7 Kothi, xa ithe yafika kuwe loo miqondiso, uzenzele njengoko siya kufumana ngako isandlaisandla sakho; ngokuba uThixouThixo unawe;
8 uhle uye phambi kwam eGiligalieGiligali. Yabona, ndiyehla, ndiza kuwe, ukuze ndinyuse amadini anyukayo, ndibingelele imibingelelo yoxolo. Wolinda imihla esixhenxe ndide ndize kuwe, ndikwazise oko uya kukwenza.
9 Wathi uSawule, akuthi khwitshi ukuba emke kuSamuweli, uThixouThixo wamguqula, wanantliziyo yimbi. Yafika yonke loo miqondiso kwangayo loo mini.
10 Bafika eGibheha apho, nalo igqiza labaprofeti limkhawulela; wamfikela ngamandla uMoyauMoya kaThixo, waprofeta phakathiphakathi kwabo.
11 Kwathi, bakumbona bonke ababemazi ngaphambili, eprofeta ndawonye nabaprofeti, bathi abantu omnye komnye, Uhliwe yintoni na unyanaunyana kaKishe? Ukubaprofeti noSawule na?
12 WaphendulaWaphendula umntu wakhona, wathi, Ngubani na uyise wabo? Ngenxa yoko kwabakho umzekeliso wokuthi, Ukubaprofeti noSawule na?
18 beza kuYehova eMizpa. Wathi koonyana bakaSirayeli, UtshoUtsho uYehova, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Ndawanyusa mna amaSirayeli eYiputa, ndanihlangula esandleni samaYiputa, nasesandleni sezikumkani zonke ezanixinayo.
19 Namhla ke nimcekisile nina uThixouThixo wenu, owanisindisayo ebubini benu bonke, nasekubandezelweni konke, nathinathi kuye, Simisele ukumkani phezu kwethu. Kaloku ke zimiseni phambi koYehova ngokwezizwe zenu, nangokwamawaka enu.
20 Wazisondeza ke uSamuweli zonke izizweizizwe zakwaSirayeli, kwathatyathwa isizwe sakwaBhenjamin.
21 Wasisondeza isizwe sakwaBhenjamin ngokwemizalwane yaso, kwathatyathwa umzalwane wakwaMatri, kwathatyathwa ke uSawule unyanaunyana kaKishe. Bamfuna, abamfumana.
23 Babaleka, bamthabatha apho. Wema phakathiphakathi kwabantu, wamde kubantu bonke, ethabathela emagxeni anyuse.
24 Wathi uSamuweli kubantu bonke, Niyambona na lo unyuliweyo nguYehovanguYehova; ukuba akukho unjengaye ebantwini bonke? Baduma bonke abantu, bathi, Makadle ubomi ukumkani!
26 Naye uSawule waya endlwini yakhe eGibheha; lahamba naye iqela elinobukroti, elintliziyo zichukunyisiweyo nguThixonguThixo.
IGenesis 35:19, 20
IDuteronomi 17:14, 15, 20, 32:9, 33:12
Yoshuwa 1:5, 9, 4:19, 7:14, 18:28, 22:6, 24:1
Abagwebi 1:1, 3:10, 6:8, 9, 14:6, 9, 15:14, 20:18, 23, 27
1 Samuweli 3:19, 21, 4:1, 7:5, 6, 16, 8:5, 7, 9, 9:1, 2, 3, 10, 16, 20, 11:4, 6, 12, 14, 15, 12:1, 13:2, 3, 4, 8, 15:1, 17, 33, 34, 16:13, 19:20, 24, 20:13, 23:2, 4, 9, 30:7, 8
2 Samuweli 2:1, 7:3, 19:16, 20:19, 21:1, 6
1 Kumkani 1:25, 34, 5:1, 18:29
2 Kumkani 2:3, 5, 7, 15, 3:15, 9:3, 6, 12
EyokuQala yeziKronike 25:3
2 yeziKronike 17:5
INtshumayeli 3:7, 7:21, 9:10
Izenzo zaBapostile 21, 22:10